Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Qeybo Ka Mid Ah Gobalka Mudug. – Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Qeybo Ka Mid Ah Gobalka Mudug.
Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka dhaceen deegaano hoos yimaad degmada Cadaado.
Dagaalka oo ahaa mid saacada badan qaatay ayaa dhaxmaray ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaad taabacsan maamulka dabadhilifka Galmudug.
Dad ku sugan gobolka Mudug ayaa soo sheegay in maanta barqadii dagaal faraha looga gubtay uu ka bilaawday tuulada Ceel-Cabdi oo qiyaastii 20KM ujirta deegaanka Cammaara.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad isugu jira Galmudug iyo Burcad badeed ay weerar ku qaadeen xarumaha wilaayada Islaamiga ee Ceel-Cabdi.
Â Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalka oo bilaawday 9:00 barqanimo ee maanta uu soo gaaray 12:00 duhurnimo, khasaara xooggan ayaa la gaarsiiyay maleeshiyaadka Galmudug ee Xabashida Itoobiya gadaal kasoo riixayso.
Khasaaraha gaaray Galmudug ayaa lagu sheegay 10 dhimasho ah iyagoona sedax Meyd uga cararay goobihii lagu dagaalamay,Taliyihii Hoggaaminayay ciidanka weerarka soo qaaday oo magaciisa lagusoo gaabiyay Ashqaal ayay hubanti laâ€™aan ka taagantahay xaaladdiisa nololeed.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Ashqaal uu u dhintay dhaawac halis ah oo gaaray halka warar kale ay sheegayaan in isagoo dhaawac gaarba ah la geeyay deegaanka Cammaara.
Dagaal Ooge Ashqaal ayaa horay u ahaa Taliyihii kooxaha Burcad Badeedda Mudug balse markii dambe ayuu ku biiray maamulka dabadhilifka ah ee Cadaado kajira.
Sidoo kale waxaa dagaalkii Ceel-Cabdi ku dhaawacmay madaxii PS-ta degmada Cadaado oo magaciisa lagusoo gaabiyay Joon.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Galmudug ay si dirqi ah ula baxsadeen 7 gaari Tigniko ah oo ku sigtay in ay gacanta Al Shabaab ku dhacaan.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dhammaan goobihii lagu dagaallamay ay ku suganyihiin xoogaga shabaabul Mujaahidiin halka maleeshiyaadka amxaara kalkaalka ah oo dhimasho iyo dhaawac wata ay dib ugu laabteen Cammaara.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 21-05-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 21-05-1437 Hijri.
1 thought on “Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Qeybo Ka Mid Ah Gobalka Mudug.”
allaha guuleeyo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan